Vanyoreri Vemahara paYouTube | Tenga Vanyoreri veYouTube
Yedu Premium Services
Tenga YouTube Optimization
#1 Sevhisi Kukurisa Yako YouTube Channel neVanhu Chaivo, Nekukurumidza!
SubPals ndeyemahara YouTube vanyoreri kukura chikuva chakagadzirirwa kutanga-chako chiteshi kuburikidza nekubatanidzwa kubva kuvanhu chaivo! Tanga rwendo rwako rwekukura ikozvino.
Zvishandiso zvakakosha zveYedu Yemahara YouTube Vanyoreri Service
SubPals inopa network yekuvandudza iyo inokubvumidza kuti ugamuchire gumi uye emahara YouTube vanyoreri ega maawa gumi nemaviri! Iyo sevhisi ndeyemahara uye inosanganisira dzimwe dzakabhadhara dzakabhadharwa sarudzo kune avo vanoda kunyangwe vakawanda vanyori ezuva nezuva.
SubPals yakagadzirirwa kuve nyore seyenekisheni yevanhu! Yako nguva yakakosha uye tinonzwisisa izvo, saka takagadzira network kuti ikupe gumi+ emahara YouTube vanyoreri kwemaminetsi mashoma yenguva yako.
Yedu yemahara subs network inopa kuchinjana pakati pako nevamwe maYeTubers anotarisa kuti awedzere avo vanonyorera, saka iwe uchagashira kunyoreswa kubva kune vamwe YouTube YouTube varidzi. Iyo inoshanda nzira yekuwana vakawanda YouTube vanyori!
Kushandisa SubPals kugamuchira mahara YouTube vanyoreri 100% yakachengeteka kune yako YouTube account. Iwe unogona kunzwa uine chivimbo kuziva kuti network yedu yakachengeteka kushandisa uye yakachengeteka nguva dzese.
Mhedzisiro Unogona Kuona
Paunomutsa chirongwa chemahara kana chakabhadharwa chiteshi chako, uchaona vanyori vekiteshi vako vatanga kukura zuva rimwe chete iro! Chero hurongwa hunotanga kushanda nekukurumidza kuti ukure kutendeseka kwechiteshi chako.
Chikwata chedu chine hushamwari chiri pano kubatsira! Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida rubatsiro nechinhu chero chipi, isu tangova email kure. Paunobatana nesu, iwe unogona kugara uchitarisira mhinduro panguva.
Nhanho Dzakareba Kuti uwane Vanyoreri Vahara
Nyorera & Like Mavhidhiyo
Masekonzi makumi matanhatu Gare gare, Waitwa!
Gara Kudzokera & Gamuchira Vanyoreri Vako Vanyoreri
Ndinoda Vanyoreri Vemahara Zvino
Gumi dzeYakakosha Kubatsirwa KweMahara YouTube Vanyoreri
Zvinhu zvakanaka kwazvo muhupenyu zvakasununguka; uye nekukwira kwemagariro enhau, chii chiri nani pane vanyori veMahara YouTube? Zvakanaka, iwe unogona kudoma mazita mashoma izvo zvinhu zviri nani; asi chokwadi ndechekuti, kutevera kwako pamasocial media, senge YouTube, kwawedzera kukosha munyika yanhasi.
"YouTube ine zvakawanda zvakanaka zvemukati. Uye zvine chimwe chinhu kune wese munhu. Uye vanhu vanouya kwandiri nguva dzese votaura neni nezve mashandisiro akaita YouTube hupenyu hwavo, kuti vakwanisa sei kudzidza chimwe chinhu chavasina kufunga kuti vanogona kudzidza. ”
Mabhiriyoni mashanu. Ndiyo nhamba yemavhidhiyo eYouTube akagovaniswa pane saiti kusvika zvino. Kubva kuvambwa kwayo muna Kukadzi 14th, 2005, iyo inozivikanwa vhidhiyo-yekugovana chikuva yakaenderera ichikwezva vashandisi vatsva vanogadzira zvemukati nekukasira kumhanya. Kudanana kwenyika neYouTube hakusi nekuti kwakagadzirwa paZuva raValentine, zvakadaro. Zviri nyore kunzwisisa kuti sei chakave chakakosha chishandiso kune vashandisi kuti vagare vakabatana uye vagare vachiziva.
Muchokwadi, maererano nePew Research Center, vanopfuura makumi maviri muzana evashandisi vevakuru vakaratidza kuti vanoshandisa YouTube seyunowanikwa nhau. Izvo zvinoita kuti YouTube ive yechipiri inonyanya kushandiswa yemagariro midhiya saiti yenhau, kumashure kweFacebook, uko whopping 20% yevakuru vashandisi vanoti vanowana nhau yavo. Chii chakanyanya, maererano naOmnicore, makumi manomwe neshanu emamiriyoni emamirioni vanosarudza kutarisa mavhidhiyo eYouTube kuona terevhizheni yechinyakare.
Chii, kupi vanhu vanowana nhau kwavo kubva, chine chekuita nevateveri veMahara YouTube? Zvakanaka, ipfungwa yakanaka kuti uve nekunzwisisa kwakazara kwekuti YouTube ine tsika pachii, uye kuti tsika yedu inotora sei mune ruzivo. Uine ruzivo urwu, iwe uchave kukwanisa kusvika kune vateereri vako zvinobudirira.
Huwandu hunoratidza kuti vanhu vazhinji vari kutendeukira kumasaiti seYouTube kuti vadzidze pamusoro pezviri kuitika munyika, asi hazvigume ipapo. Vashandisi veYouTube vari kudzidza marudzi ese ezvimedu zveruzivo pane zvese kubva sei pakuisa zvigadziriso zvemwenje, kune-yekuisa-pauni. Asi ikozvino, zvakanyanya kupfuura nakare kose, vashandisi vari kuona YouTube mavhidhiyo kuti vadzidze nezvemabhizinesi nemabrake.
Ndiyo nzvimbo yakanaka yekusimudzira kambani yako. Vhidhiyo yekutaura nyaya inopa iyo yakasanganiswa yakasangana yeruzivo uye varaidzo, uye mavhidhiyo anotumira ruzivo rwakanyanya munguva pfupi pfupi yenguva. Kuburikidza neYouTube, iwe unosvika pakuratidza vateereri vako kutarisa kwakasarudzika mune yako kambani tsika uye kugovera ruzivo rwavaisawanzowanzo kuwana kubva kudhinda kana dijitari ad.
Kunyange YouTube yakanakira kubatana nevatengi varipo uye vangangove vatengi, iwe unofanirwa kugadzirira makwikwi. Vangaita makumi manomwe neshanu muzana emabhizinesi vakatoverengera YouTube mumatanho avo ekushambadzira, uye nhamba iyoyo ichangoramba ichikura.
Ruzivo rwakawanda rwunogovaniswa kuburikidza neweji pane imwe nguva, zvinokwanisika kusinga bude kunze. Anoda kusvika maawa mazana matatu evhidhiyo akaiswa paminiti imwe neimwe. Kana iwe ukaita masvomhu, anopfuura maawa mazana mana ezviuru pazuva, uye anenge maawa mazana maviri nemakumi mairi nemazana mairi pagore. Iwe waizopedza makore 300 uchitarisa YouTube mavhidhiyo kuti uzorodze 400,000 chete. Tora mufananidzo?
Iwe unoona kwatinoenda neizvi; verenga pazvikonzero zvisere zvakakosha kuti utore vanyore paYouTube.
Vaka inotevera yakakura
Chikonzero chekutanga chekutora vanyori vemahara chakanangana-chaunoda kuvaka chiteshi chakakomba chinotevera! Kunyangwe iwe uri mushandisi mutsva, kana kuti pamwe unotova neYouTube chiteshi asi uchinetseka kuwana dhizaini, vamwe vanyoreri vanyori vanogona kuenda nenzira refu kuvandudza kwakasimba kubatana uye nehutano hunotevera.
YouTube's algorithm inofarira chiteshi uye nevakawanda vanyoresa nekuratidza zvavo zvemukati kune vateereri vakawandisa. Izvi zvinogadzira snowball mhedzisiro nekuti vanhu vazhinji vanoona chiteshi chako, zvakanyanya mukana wekuti vanozozvinyorerawo kwazviri.
Iwe unoda kucherechedzwa pane mamwe masocial media masaiti
Mazhinji masocial media masaiti kunze uko anogona kubatana pamwe kune wega mushandisi. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kugovana zvemukati pamapuratifomu, uye nekuwedzera kukura kwevateereri vako. Kana vhidhiyo yakakurumbira paYouTube, pane mukana wakanyanya wakanyanya wekuti vanyorese kutumira vhidhiyo kune mamwe ma media media nhoroondo. Vazhinji vanyoreri veYouTube vanoreva vanhu vazhinji vangangogona kubatsira kuparadzira mavhidhiyo ako kune mamwe mapuratifomu. Nenguva isipi, vhidhiyo yacho inoita kunge iripowo, uye iwe unotomira mukana wekuenda kuhutachiona.
Ndiko kurota kweYouTuber kwese. Enda hutachiona, ita kuti zvemukati zvionekwe nemamirioni, uye enda pasi muYouTube nhoroondo nemavhidhiyo emifananidzo yenguva yedu se "Charlie Bit My Finger" uye "Harlem Shake." Zvinogona kuita senge "maminetsi gumi nemashanu chete ekurumbira," asi muchokwadi, vatengi vazhinji vanoona zvigadzirwa uye vanoita sarudzo dzekutenga mushure mekudzidza nezvazvo pasocial media.
Dzimwe nguva hazvinzwisisike kuti sei zvimwe zvinhu zvichienda kuhutachiona, asi kazhinji kutaura, mavhidhiyo emhando yepamusoro ane zvekuuraya anowanzoonekwa. Asi, zvisinei kuti mavhidhiyo ako akaumbwa neunyanzvi sei, kana iwe usina yakanaka kunyoresa kuverenga, hazvina chokwadi kuti chero munhu achaona mavhidhiyo ako. Kuwana vateveri vakawanda zvinoreva kuti chiteshi chako cheYouTube chichaonekwa mune zvakawanda zveYouTuber "zvinokurudzirwa zvemukati." Iyo snowball effect inotanga, uye usati wazviziva mavhidhiyo emhando yako ari kugoverwa pasi rese nemamiriyoni evanhu. Kuwana vemahara YouTube vanyoreri ingori nhanho yekutanga. Kana iwe ukafunga kutenga vanyoreri veYouTube, ita shuwa kuti uvatenge kubva kukambani ine mukurumbira yanga ichishanda kwemakore angangoita akati wandei uye ine mukurumbira wekuendesa emhando yepamusoro, masevhisi akavimbika.
Tora zororo kubva kumavhidhiyo mashoma asingafarirwe
Nhau dzezvemagariro dzakanaka nekuti dzinopa izwi kune wese munhu wepanyika. Chero ani anogona kugovera iwo mafungiro ake nekubata kwe bhatani. Asi nezvakanaka, zvinouyawo zvakaipa, uye vashandisi vane simba rakanyanya kutengesa remuromo wakashata pamwe nenyika yese sevateereri vavo. Kana iwe uchinge wawana mamwe emashoko akaipa akakuvadza yako vhidhiyo renji, kuwedzera yako vanyoreti kuverenga kuchabatsira kurwisa izvi.
Iyo inonzi social proof, uye kuti vanhu vanodzidza sei zvekuita nezvisingaite. Vanhu vanowanzofarira kuda chimwe chinhu chavanofunga kuti vamwe vanhu vanofarira. Kupesana ichokwadi zvakare; munhu achatonga chimwe chinhu chakashata kana chisingafarirwe kana vaona vamwe vanhu vasingazvitenderi zvakare. Vanyoreri veYouTube vakaita sevhoti mune chako, funga nezvavo seyakanaka ongororo. Kunyangwe kana chiteshi chako chine mavhidhiyo mashoma asingafarirwi asi aine nhamba yepamusoro yevanonyoresa, vamwe vashandisi vanofunga kuti mhando yako inozivikanwa, uye vanogona kukanganwira vashoma kusada pano nepapo.
Wedzera kukosha kwechigadzirwa chako
YouTube zviteshi vane vashoma chete vanyoreri vanoita sevachangoburwa. Mabhizinesi matsva achiri kukwezva vatengi nekuti munhu wese anoda kuve wekutanga kuwana nyowani "iyo" nzvimbo. Asi, mushure mekunge guruva ragadzikana kana iwe usati wavaka dura nyowani nyowani, vanhu vachazofunga kuti pane chakashata nechiratidzo chako. Kana iwe ukawana mahara vateveri veYouTube, mhando yako inoita senge yave nenguva yakareba kuti iite zita rakanaka pachayo. Izvi zvichavaka kuvimba nevako vatengi uye kuwedzera mikana yako yekutengesa zvimwe zvigadzirwa zvebhizimusi rako.
Yako yeYU YouTube inotevera inoda kuchengetedzwa
Kungofanana nehukama chero hupi, hukama hwehutano hwemagariro hunotevera kuzvipira kwakakura. Kazhinji, mabhizinesi anozove nevashandi vanozvipira avo vano maneja ma account avo enhau. Asi vanhu ava havashande mahara. Mabhizinesi anoguma achishandisa zviuru zvemadhora kubhadhara mari gore negore uye mabhenefiti, uye makambani matsva aine marara-akaonda marara kazhinji haakwanisi kuramba akadaro.
Kuchengeta yakakura yemagariro midhiya kuvapo ibasa renguva yakazara nekuti Izvo hazvina kukwana kungoisa chete mavhidhiyo kuYouTube kana iwe uchida kucherechedzwa. Zvinoda nguva uye simba kuti ushande kutumira, kugovana, uye kupindura, senge, kuona, uye kuita nevateereri vako, zvinoita sekunge bhizinesi rako munhu chaiye. Asi iko kubatana kwacho kunoita kuti YouTube ive chinhu chakakosha! Hapana mubvunzo kuti bhizinesi rako rinofanira kunge riri paYouTube; ingori nyaya yekuti uchaita sei mutoro.
Iwe unogona kutora chirongwa chikuru iwe pachako, asi zvakare une zvakawanda zvimwe zvebhizinesi zvinodikanwa izvo zvinoda kutariswa kwako. Kuwana emahara YouTube vanyori kunotora mutoro wekuvaka yako YouTube kuvapo kubva pakazevesa kubva pamapfudzi ako. Unogona kuzorora zviri nyore uchiziva kuti vateveri vako vanochengetwa uye vanodzoka kutarisana nezvenzira dzakakosha dzebhizinesi.
Chitarisiko chakakwirira pakutsvaga
Isu takambotaura pamusoro pekuti YouTube algorithm inofarira sei zviteshi nevazhinji vanyoreri nekuzviisa pachena kune vateereri vakawandisa. Chikamu cheizvi chine chekuita nekwainowanikwa nzira idzi mukutsvaga. Zvakafanana neizvi, ngatiti iwe une yako yekudyira inozivikanwa nekubikira iyo fresest veggies. Kana bhizinesi rako 'YouTube chiteshi riine vashoma vanyoreri pane girazi rakachenama pasi pevhu, mavhidhiyo avo achaonekwa akakwirira pakutsvaga kupfuura ako, kunyangwe yako yemwaka salad inogona kushandura inotyisa yemacarnivores. Nekudaro, zvisinei nekuti zvakanaka zvemukati wako, uine nhamba yepasi yevanonyoresa iwe unomhanya njodzi yekurasikirwa nebhizinesi kune rakaderera brand.
Iwe wakashanda nesimba bhizinesi rako, uye iwe unoda kuve nechokwadi chekucherechedzwa. Kuwana vanyoreri veYouTube kuchabatsira kuona kuti chinyorwa chako chinoonekwa pamusoro pechinyorwa mukutsvaga, uye kuti zvemukati zvinokunda mukwikwidzi.
Idzidziso inofarirwa inoshandiswa nezviuru zveakaundi
YouTube chinhu chakakosha chishandiso kune vatengesi. Kuwana vanyoreti ve chiteshi kwakafanana nekuita vanhu kusaina kuti vatarise zvigadzirwa zvako zuva rega rega. Haisi chete iyo YouTube chikamu chakakosha cheyipi nzira yekushambadzira asi kuwana mahara Vanyoreri veYouTube ndechimwe chezvakanakisa-zvakavanzika muindastiri iyi. Iwe unoshamiswa nehuwandu hwemaakaunti kunze uko kune vasina-organic vanyoresa uye vateveri. Models, vatyairi vemitambo, kunyangwe vezvematongerwo enyika, vese vakawana vanyorese YouTube pamakaunti avo uye vari kuona yavo inozivikanwa nzira ichawedzera pamberi pemeso avo.
Vazhinji vedu takawana yemahara Ad chikwereti kubva kuFacebook. Chinhu chimwe chete icho. Funga nezve kuwana vateveri sekuwedzera chikwangwani pa Facebook, ese ari maviri nzira dzinobatsira dzekuwedzera vanonyoresa. Musiyano wega ndewekuti, kukwirisa zvimiro paFacebook nemamwe masayiti kune njodzi nekuti hauna kuvimbiswa imwe nhamba yevateveri kana kuita chero kuitirana nguva dzese.
Wedzera bhizinesi mari
Kunge chero bhizinesi, iwe unoda kuwedzera yako yepasi mutsara. YouTube ndiyo yakakwana puratifomu yekushandura vangangove vatengi mukati mevatengi kwehupenyu nekugovana kuita vhidhiyo nezve brand yako. Izvo zvese zvinotungamira kune izvi. NezveMahara YouTube vanyoreri, iwe unogona kuvaka yakawedzera zvakanyanya kutevedzera kune bhizinesi rako. Kubva ipapo, mavhidhiyo ako anogona kupararira kune mamwe masayiti sa Facebook, uye unomira mukana wekuti uende nehutachiona; uye kufumura chiratidzo chako kumamiriyoni evatengi. Takatarisa kune zvimwe zvakanaka zvakare, asi kuti chii chikonzero chese chinoburukira pasi ndechekuti kuwedzera yako YouTube subsentier kuverenga kuchaunza mukuwedzera bhizinesi mari.
Mhoro … Ndezvemahara!
Mikana ndiyo musoro wechinyorwa ichi wakadzora kufarira kwako. Yemahara YouTube Vanyoreri havawanzo kuwanikwa, asi kune makambani kunze uko ari kupa kunze vanyoreri! Izvi hazvisi izvo bots chete zvinokanganisa yako account; ivo vashandisi chaivo vanobatsira kuti organally kuwedzera yako vanonyorera kuverenga uye kuwana rako bhizinesi kunze uko.
Saka izvi zvinoreva chii kune rako bhizinesi?
Zvinotaurwa naSusan Wojcicki hapana mubvunzo kuti ichokwadi; YouTube ine chimwe chinhu kune wese munhu. Sebhizinesi paYouTube, zvisinei, hazvina kukwana kuti uve chimwe chinhu mumwe munhu , iwe unofanirwa kushandira kuva chimwe chinhu vose . Kunyange zvinoshamisa sezvazvinogona kurira, YouTube yave kuzivikanwa kupfuura terevhizheni inetiweki, uye kunyange tambo. Vashandisi vanonzwa kubatana kwakasiyana neiyo pulatifomu uye nematanho avanotevera nekuda kwekutarisirwa kwepedyo kunovapa muhupenyu hwezuva nezuva "hupenyu" hwemhando. Kuwana emahara YouTube vanyoreri ndiyo nzira yakanyanya kusvetuka-kutanga yako YouTube kuvhura uye kuvhura musuwo wekubudirira bhizinesi.
Tora Vanyoreri vako veMahara YouTube Kurumidza uye tanga rwendo rwako kuenda kuYouTube mukurumbira nhasi!
Mazano ekugadzira Anokanganisa Muswe Wakareba Vhidhiyo paYouTube
Chokwadi, YouTube Shorts iri kuita mafungu pasocial media. Asi waizviziva here kuti vanhu vazhinji vanongoona mavhidhiyo akareba-muswe chete? Aya mavhidhiyo marefu eYouTube, ...
Gwaro Rako reKutangisa Corporate YouTube Channel
Yekambani YouTube chiteshi chakanyanya chiteshi cheYouTube chebhizinesi. Nepo YouTube isingasiyanise chiteshi chemunhu uye chemakambani, pane zvinhu zvakati wandei zvaunogona kuita ...
Mangani Mabhegi Aunofanira Kushandisa Kuti Zvirinani YouTube Kuonekwa?
YouTube haingori chikuva chekutepfenyura vhidhiyo zvakare - yavewo injini yekutsvaga. Muchokwadi, iyo Google-inopihwa puratifomu ndeyechipiri chete kuGoogle maererano nekutsvaga ...
Pano paSubPals, tinozvirumbidza nebasa rakasiyana uye nemitengo inokwanisika. Usangotora izwi redu pazviri - tarisa ongororo yedu yevatengi pazasi.
Ini ndiri musiki wezvemukati, zvakabatsira chaizvo nekuti Subpals yakawedzera vanyoreri kuchiteshi changu maawa gumi nemaviri ega ega.
Iyi webhusaiti yakanakira kukura ma youtubers anoda kukurudzira. Ini ndakatanga ne80 vanyoreri uye ikozvino ndine mazana mashanu.
Ini ndanga ndichitsvaga matipi madiki ekuwana vanyoreri veYouTube chiteshi pawebhusaiti pandakagumburwa neSubPals uye ini ndakanyatso kuchera, ndichifunga kuti chaizova chitsotsi. Neraki yakanga isiri uye ndakakwanisa kuwana vakanaka gumi vanyoreri mumaminetsi mashoma! Ini ndinokurudzira zvikuru, uyezve iwe unogona kushandisa masevhisi avo mahara kamwe pazuva;)
Webhusaiti yakanaka, iwe unowana emahara subs. Uye haina mavhairasi zvakare. Saka zvinoshamisa. Tarisa webhusaiti ino. ZVINO!
Yakanaka kwazvo sevhisi pamutengo mukuru wepoindi, idai yekunyorera-yakavakirwa modhi. Maonero uye subs ndeye organic.
Zvinotora inenge hafu yeawa kuti uwane mukana kune chirongwa chemahara, icho chinokupa iwe maminiti ehuwandu hwegumi subs 10h yega, kunyangwe iwe uchifanira kuimisa nemaoko. Inobatsira kune vanhu vatsva vanoda kukura yavo yt chiteshi. Nzvimbo yacho iri nyore kufamba.
Kunze kwese YouTube sub yemawebhusaiti kunze uko, Subpals inofanirwa kuve yakanyanya kunaka, maawa gumi nemaviri iwe unogona kugaya vanyori gumi izvo zvakanaka chaizvo, chokwadi vamwe vanhu vanozozvinyora izvo zvinosuruvarisa chinhu icho mawebhusaiti akaita seaya haakwanise kudzivirira. , Ndakashandisa sub pals munguva yakapfuura uye kubva pane zvakaitika kwandiri, ndiyo nzira yakanakisa yekuwana vanyoreri veYouTube.
Saka zvinoshamisa zvine akawanda ma subs uye anoda haatende kuti ino saiti ndeyechokwadi asi inoshanda zvakanaka kwazvo.
Zvakanakisa zvakanakisa, zvinokurudzirwa zvakanyanya kune wese munhu. Shandisa masevhisi avo, anoshamisa chaizvo. Ndiri kuwana ma subs kuchiteshi changu nguva nenguva..
Yakanakisa nzira yekuwana vanyoreri payoutube zvakatora nguva asi inobatsira uye inoshanda saka ini ndinoikurudzira!
Vanyoreri ndezvechokwadi izvo zvatinowana kubva subpals.com. Ini ndichakukurudzira kuti ushande pa subpals.com yeYouTube chiteshi kukwidziridzwa. Ndatenda
basa rakanaka. Chirongwa chemahara chinoshanda
Sevhisi yakanaka kwazvo inobatsira chiteshi changu kukura. Kune zvakawanda zvevhiki nevhiki zvekupa izvo zvinoshamisa chaizvo.
Yangu youtube chiteshi JE Imposters akawana vakawanda vanyoreri kubva kuSubPals! Ndanga ndichingotumira kwevhiki chete uye ndine senge 30 subs already! Senge izvo zvinoshamisa saiti ino inoshanda chaizvo uye ini ndinoikurudzira zvikuru
Super yakanaka, ndinofara kuti yakanyatsoita zvayanga ichisimudzira! Ivo vanokupa subs mune imwe nyaya yemaminetsi uye inoita seyakavimbika
chikuva chikuru kunyanya kune vanotanga!
Ndinoda iyi webhusaiti zvakanyanya. Unogona kuwana vamwe vanyoreri vemahara kungofarira uye kunyoresa vamwe vanhu.
Izvi zvakachengeteka zvakanyanya kushandisa sezvo ndanga ndichiishandisa kwemavhiki maviri ikozvino pasina matambudziko. saka ndinofunga vanhu vari kuyedza kukura zvishoma nekukurumidza vanofanira kuenda uye kushandisa ino saiti
Yakanaka kwazvo, 100% yakakurudzirwa, shanda zvakakwana, kana iwe uchida kukura, iyi ndiyo webhusaiti yako. Ndinokurudzira youtube
- Mosesi R.
Webhusaiti yakanakisa zvachose! Ndoedza zvakare! Senge kana iwe uchida rubatsiro nechiteshi chako, izvi zvinonyatso batsira!
Ndiri kunzwa kufara zvikuru mushure mekujoinha iyi webhusaiti. Uye ndakakurudzira saizvozvo kwamuri mose kuti mujoine pano.
Iyi inoshamisa app, inokupa iwe yemahara subs! Zvechokwadi ndingavakurudzira sezvo aya ma subs anogona kubatsira chaizvo.
Zvakanakisa! Iwe unowana vakatenderedza 15 vanyoreri everytime uye chete kurasikirwa kumativi 3. Ndakaenda kubva 9 kusvika zvishoma pamusoro 30 mumazuva 2!
Kudza chiteshi chako zviri nyore nekungonyoresa kuvanhu! Ndinokurudzira zvikuru kuti uedze izvi! Iwe hauzozvidembi uye saiti ino ine sevhisi yakanaka kwazvo. Kana iwe ukatenga chero kunyoreswa pano senge bhizinesi kana chimwe chinhu, iwe unenge wava nemukurumbira munguva pfupi ...
YouTube Chiteshi Kuongorora
YouTube Vhidhiyo SEO
YouTube Graphic Dhizaini
sevhisi YouTube Chiteshi Kuongorora ($ 120)
Yakadzika-yakanyorwa vhidhiyo kuongororwa kweYouTube chiteshi + ongorora vakwikwidzi vako + 5-nhanho yekuita chirongwa cheako anotevera matanho
Yakazara Chiteshi Kuongorora
Matipi Akanangana neChannel Yako & Vhidhiyo
Wongorora Wako Mavhidhiyo & Zvemukati Strategic
Zvakavanzika zvekusimudzira Vhidhiyo & Tora Subs
Yakatsanangurwa 5-Nhanho Yekuita Kuronga Yako
Nguva yekutumira: Mazuva makumi matatu kusvika makumi mashanu
sevhisi 1 YouTube Vhidhiyo SEO ($ 30) 3 YouTube Mavhidhiyo SEO ($ 80) 6 YouTube Mavhidhiyo SEO ($ 150) 12 YouTube Mavhidhiyo SEO ($ 280)
Ongororo izere yevhidhiyo yako yeYouTube, ichibvumidza isu kukupa iwe inovandudzwa Chinyorwa + Tsananguro + 5 Keywords / Hashtags.
Yakazara Vhidhiyo SEO Ongororo
1 Yekuwedzera Musoro Wakapihwa
1 Tsananguro Yakawedzerwa Inopihwa
5 Yakatsvaga Keywords / Hashtags
sevhisi 1 Chiteshi Banner Dhizaini ($ 80) 1 Vhidhiyo Thumbnail Dhizaini ($ 25) 3 Vhidhiyo Thumbnail Dhizaini ($ 70) 6 Vhidhiyo Thumbnail Dhizaini ($ 130)
Nyanzvi, yakanyatsogadzirisazve YouTube Channel Banner uye YouTube Vhidhiyo Thumbnails.
Professional Dhizaini Yemhando
Tsika Kuenzanisa Bhurandi Yako
Yakasimba & Kubata Dhizaini
Saizi Yakakodzera & Hunhu hweYouTube
Inonatsiridza Yako Click-Thru-Rate (CTR)
Joinina anopfuura Mamirioni YouTubers ari kushingairira kusimudzira dhivhari yavo nemahara YouTube vanyori!
Tora kukwikwidzana kwako nemahara emahara YouTube vanyori vanoshandisa SubPals 'shipping network!
... uye zvimwe zvakawanda!
Vhidhiyo Dzidzo Makosi
Mabatiro eSpam Vanotaura PaAunti Yako yeYouTube?
YouTube Copyright Claims vs. YouTube Kuramwa